အရွယ်မရောက်သေးသည့် မိန်းကလေးသတို့ သမီးများ....
၀ိုင်းစက်ပြူးကျယ်သောမျက်လုံးများနှင့် တစ္ဆေအခြောက်ခံရသကဲ့ သို့ သောမျက်နှာသွင်ပြင်များကြောင့် ထို
မိန်းကလေးငယ်များရဲ့ မျက်နှာများက သူတို့ လေးတွေရဲ့ အပြစ်ကင်းမဲ့ မှုများ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ လုယူ
ဖယ်ရှားခံခဲ့ ကြရကြောင်းအ၇ိပ်အမြွက်၊ သက်သေပြနေပါတော့ တယ်...
သူတို့ လေးတွေအနေနှင့် ပျော်ရွှင်စွာကစားနေကြရမည့် အစား၊ ပညာသင်ကြားရမည့် အစား၊ ကလေးဘ၀
အပူအပင်ကင်းစွာနေထိုင်ကြရမည့် အစား လက်ရှိဘ၀ကတော့ တစ်ခြားစီဖြစ်နေကြပါတယ်...
ထိုသို့ ကြောင့် ကြမဲ့ စွာနေကြရမည့် အစား မိန်းက လေးငယ်များဟာ ဗူးသီးနုနုအမွှေးသတ်သလို အရွယ်မ
ရောက်မှီမှာပင် လူကြီးဘ၀ ( အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ ) ရောက်ကြရရှာပါတယ်...
အသက် ၅ မျှအထိ ငယ်ရွယ်သည့် မိန်းကလေးငယ်များကို လျှိူ့ ဝှက်စီစဉ်ပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးလေ့ ရှိ
ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ အရွယ်မရောက်သေးသည့် မိန်းကလေးပေါင်း ၁၀ သန်းမှ ၁၂ သန်းအထိ နှစ်စဉ် အတင်း
အကြပ် လက်ထိပ်ထိမ်းမြားပေးလေ့ ရှိတယ်လို့ ခန့် မှန်းကြပါတယ်...
သမီးတော့ သူ့ ကိုမြင်တိုင်း အော့ နှလုံးနာတယ်...လို့ ဆိုတဲ့ 
အသက် ၆ နှစ်အရွယ်မှာ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ မဂျစ် ကိုလက်ထပ်ခဲ့ ရတဲ့ တာဟနီ ( ပန်းရောင်ဝတ်
စုံနှင့် မိန်းကလေး ဖြစ်ပါတယ်...)
ပုံမှာ မိန်းကလေးဟာ သူနှင့်ကံတူအကျိူးပေး၊ဘ၀တူ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း ဂါဒါနှင့် 
ဟာဂျာတောင်ခြေရှိ ၎င်းတို့ နေအိမ်ရှေ့ တွင် နှစ်စုံတွဲဓါတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ ပါတယ်...
'Whenever I saw him, I hid. I hated to see him': Tahani (in pink) was just six years old when she she married Majed, 25. The young wife posed for this portrait with former classmate Ghada, alsoachild bride, outside their mountain home in Hajjah
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ မိန်းကလေးတွေကို သူတို့ ထက် အသက် ၄ နှစ်၊ ၅ နှစ် ပိုကြီးသည့် ကောင်လေးများ
ယီမင်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီသီယိုပီးယားနှင့် တစ်ခြားသော အရွယ်မတိုင်ခင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးလေ့ ရှိ
သည့် အဖြစ်အပျက်များသည့် တိုင်းပြည်များတွင်တော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ လူငယ်လူရွယ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည် သို့ 
မဟုတ် အသက် ငါးဆယ်ကျော် မုဆိုးဖိုတွေ၊ သို့ မဟုတ် အတင်းအဓမ္မမုဒိန်းကျင့် ပြီးနောက် ထိုမိန်းကလေး
များအား ၎င်းတို့ ၏ဇနီးမယားများအဖြစ် ပြောဆိုသိမ်းပိုက်ကြသူများဖြစ်တတ်ကြပါတယ်...
တစ်ချိူ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းများကတော့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ကုန်ဖလှယ်သကဲ့ သို့ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုအ
ရေးကြွေးမှီကိစ္စဖြေရှင်းဖို့ ကြောင့် လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်...
အရွယ်မတိုင်မီအတင်းအကြပ်လက်ထပ်ပေးခြင်းများဟာ နိုင်ငံဒေသများမှာ ဥပဒေများနှင့် ဆန့် ကျင်စွာပင်
ထိုဒေသပါတ်ဝန်းကျင်လူမှုအသိုင်းအ၀န်းက မိန်းကလေးငယ်များအား ထိုသို့ စောစီးစွာလက်မထပ်ပေးပါက
သင့် တော်သူများနှင့် မဟုတ်ပဲ လွန်ကျူးမိတတ်ကျ၊ အပျိူရည်ပျက်တတ်ကြတာမို့ ယခုကဲ့ သို့ စီစဉ်ပေးခြင်း
သည်သာလျှင် သင့် တော်လျော်ကန်သည့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်...
ထိုသို့ အတင်းအကြပ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းအခမ်းအနားများကို ညသန်းခေါင်ယံအချိန်များတွင် အများအား
ဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြပြီး အဓိကအားဖြင့် ရဲများလာရောက်မတားဆီးမနှောက်ယှက်နိုင်ရန် တစ်ရွာလုံးကလျှိူ့ 
ယခုကဲ့ သို့ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ခြောက်ချားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အမျိူး
သားပထ၀ီဝင်အသင်းကြီးမှ ဓါတ်ပုံသတင်းထောက် စင်သီယာဂေါ်နေ နှင့် ဓါတ်ပုံဆရာမစတက်ဖနီဆင်က
လဲယား တို့ ဟာ ယီမင်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ရာဂျက်စသန် ပြည်နယ်တို့ ကိုသွားရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ မိန်းကလေးများကို အသက် ၁၈ နှစ်မတိုင်မီ တရားဝင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးခွင့် မရှိ
ကြပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်များရဲ့ မင်္ဂလာပွဲများကိုတော့ (သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ
များက ) လစ်လျူပြုထားခဲ့ ကြပါတယ်...
အသက် ၅ နှစ်အထိငယ်ရွယ်သည့် မိန်းကလေးငယ်များကို မင်္ဂလာဖိတ်စာများတွင် နာမည်မဖော်ပြပဲ လျှိူ့ 
ဦးလေးဖြစ်သူက အိပ်ယာကနှိုးပြီး သတို့ သားအိမ်ကိုချီသွားနေသည့် အသက် ၅ နှစ်အရွယ်ရှိ
သတို့ သမီးလေး ရာဂျနီ....
သတို့ သမီး ရာဂျနီ နှင့်သတို့ သားကလေး...
ရာဂျက်စသန်မှဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အစ်မဖြစ်သူများလည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ ကြ
ပြီးနောက် အသက် ၅ နှစ်အရွယ်ရှိ သတို့ သမီးလေး ရာဂျနီခမြာမှာတော့ သူမရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမစခင်အချိန်လေး
အထိ အိပ်ပျော်နေခဲ့ ရှာပါသေးတယ်...
သူမရဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူတစ်ဦးက သူမကို ကုတင်ပေါ်မှပွေ့ ချီသွားပြီး လရောင်အောက်မှာပဲ ကောင်းချီးပေး၊ သြ
ဘာပေးမည့် ဟိန္ဒူဘုန်းကြီးထံနှင့် သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်ရှိကောင်လေးထံသို့ ခေါ်သွား
သတို့ သမီးကလေးငယ်များအနေနှင့် အရွယ်ရောက်သည်အထိ မိမိတို့ မိသားစုနှင့် ဆက်လက်နေထိုင်ကြရ
တတ်ပေမယ့်အမြဲတမ်းတော့ ထိုကဲ့ သို့ ချည်းမဟုတ်ပါဘူး....
လွန်ခဲ့ သည့် ၃ နှစ်က နူဂျူဒါအလီ လေးရဲ့ ဇတ်ကြောင်းကတော့ ကမ္ဘာသိဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်ရှိ ယီမင်နိုင်ငံသူလေးဟာ သူမရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက အတင်းအကြပ်လက်ထပ်ပေးခဲ့ 
သည့် အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်ရှိခင်ပွန်းဖြစ်သူက ရိုက်နှက်ခဲ့လို့ တရားရုံးသို့ ရောက်အောင်ထွက်ပြေးလာ
ခဲ့ ပြီး ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခဲ့ ပါတယ်...
သူမဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်အသက်မပြည့်မှီအတင်းအကြပ်လက်ထပ်ပေးခြင်းခံရသူ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ
မိန်းကလေးငယ်များအတွက် နမူနာဖြစ်ခဲ့ ပြီး သူမရဲ့ ဘ၀ဇတ်ကြောင်းဖြစ်သည့်ကျွန်မအမည် နူဂျူဒ်၊ အ
သက် ၁၀ နှစ်၊ တစ်ခုလပ် ဖြစ်ပါတယ် စာအုပ်ကိုလည်း မကြာသေးခင်ကမှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ ပါတယ်...
သူမဟာ ယခုအခါမှာတော့ မိသားစုနှင့်အတူပြန်လည်နေထိုင်ပြီး ကျောင်းပြန်တက်လျှက်ရှိပါတယ်...
( သူမကဲ့ သို့ အရွယ်မရောက်မှီလက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးခြင်းခံရသည့် )မိန်းကလေးတိုင်းအကုန်လုံးတော့ 
ပညာမတတ်ပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင့်အတင်းအကြပ်လက်ထပ်ပေးခြင်းခံရသည့် မိန်းကလေးများလည်ုးရှိ
တတ်ကြပြီး တစ်ချိူ့ လျှင် ပိုမိုဆိုးရွားသည့် ဘ၀အခြေအနေမျိူးရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်...
မိန်းကလေးငယ်များဟာ အတင်းအဓမ္မကျင့် ကြံခံကြရပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာ ကလေး
မည်သို့ ပင် ငိုယိုကာ တောင်းပန်တိုးလျှိူးပါသော်လည်း...
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် သတို့ သမီးလေး ဆူရိတ တစ်ယောက် သတို့ သားနေအိမ်သို့ အသွားငိုယိုနေပုံ...
နီပေါနိုင်ငံမှ သူမနေထိင်သည့် ရွာတွင်လည်း အရွယ်မတိုင်မီလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဓလေ့ ထွန်းကားပါတယ်
မိန်းကလေးငယ်များဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူများရဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက်နှိပ်စက်စော်ကားခြင်းများခံကြရပြီး အ
သက်သေသည်အထိရန်ရှာမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံကြရသောကြောင့် လည်း ထွက်ပြေးဖို့ ကြောက်ရွံ့ ခဲ့ ကြ
ယီမင်နိုင်ငံမှ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်လည်း အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်ရှိ အိုင်ရှာ အမည်ရှိကလေးမလေးကို
အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိ အမျိူးသားတစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ပေးစားခဲ့ပါတယ်...
သူမလက်ထပ်ရမည့် သတို့ သား ( ထိုလူကြီး ) ကိုမြင်ရတဲ့ အခါမှာ အိုင်ရှာ ကလေးဟာကြောက်ရွံ့ ထိတ်
လန့် စွာဖြင့် အော်ဟစ်ငိုယိုခဲ့ ပါတယ်လို့ သူမရဲ့ အစ်မဖြစ်သူ ဖာတီမာက သတင်းထောက်များကိုပြောကြား
တစ်စုံတစ်ယောက်က ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ ပေမယ့် အိုင်ရှာ ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက သူမကိုအရပ်ပိုရှည်
သည့် ပုံပေါက်ရန် ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်စီးစေခဲ့ ပြီး မျက်နှာကိုမမြင်နိုင်စေရန် (အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိူးသမီး
များဝတ်ရုံသည့် ) မျက်နှာဖုံးကိုပါ ၀တ်ဆင်စေခဲ့ ပါတယ်...
အကယ်၍သူသာ အဖမ်းခံခဲ့ ရပါက ပြန်လွတ်လာတာနှင့် တစ်ပြိုင်နက် အိုင်ရှာကိုသတ်ပစ်မည်ဟု သတိပေး
ရဲတပ်ဖွဲ့ လည်းမည်သို့ မျှမဆောင်ရွက်ပဲပြန်သွားခဲ့ ရလို့ အိုင်ရှာခမျာတော့ယခုအခါ သူမရွာနှင့် နှစ်နာရီအ
ကြာဝေးကွာသည့် ရွာတစ်ရွာတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် အတူနေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်...
" သူ့ မှာမိုဘိုင်းဖုံးရှိတော့ နေ့ တိုင်းကျွန်မဆီဖုံးဆက်ပြီး ငိုရှာတာပါပဲ..." လို့ သူမဆိုပါတယ်...
တစ်ချိူ့ သောဖြစ်ရပ်များတွင် (မိန်းကလေးများ၏ ) ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ
အထိဖြစ်ကြရပြီး တစ်ချိူ့ ကတော့ အသက်သေဆုံးသည်အခြေအနေဆိုးတွေကြုံတွေ့ ခဲ့ ကြရပါတယ်...
ယီမင်နိုင်ငံမြို့ တော် ဆနား မှဆ၇ာဝန်တစ်ဦးရဲ့ မှတ်တမ်းများအရ မိန်းကလေးငယ်များအား အတင်းအဓမ္မ
လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ အသက်အရွယ်ငယ်စဉ်မှာပင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာသားဖွားစေခြင်းတို့ ကြောင့် သားအိမ်
ထိခိုက်ပျက်စီးကာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး သားအိမ်လျှောသည့် ဝေဒနာခံစားတတ်ကြရပါတယ် လို့ ဆိုပါ
မိန်းကလေးများဟာ အိမ်ထောင်သားမွေးခြင်းဆိုင်ရာကို သိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ တောင်အရွယ်မရောက်သေး၊
" နင်တို့ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရောသိကြရဲ့ လား...နင်တို့ ဗိုက်ထဲမှာကလေးငယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရဲ့ 
လား လို့ သူနာပြုများက အစပြုမေးမြန်းကြရပါတယ်..." လို့ ဆရာဝန်ကဆိုပါတယ်...
အနည်းငယ်မျှသောမိန်းကလေးတွေသာ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ မည်သို့ ဂရုစိုက်ရမည်၊ မွေးလာသောသားသမီး
များကို မည်သို့ ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရမည်ကိုသိနားလည်သောကြောင့် သားသမီးများငယ်စဉ်ကပင်သေ
ထိုကဲ့ သို့ တရားမ၀င်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးခြင်းများအားတားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊ အမျိူးသမီးများ၏ဘ၀နေ
ထိုင်မှုအဆင့် အတန်းမြင့် မားစေရန် အချိန်ပြည့် ကူညီဆောင်ရွက်သူများကတော့ မိန်းကလေးငယ်များအား
( ထိုအဖြစ်ဆိုးမှ ) ကယ်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းချက်ကတော့ အလွန်ခက်ခဲလှမည်ဆိုတာသိရှိနားလည်သဘော
Wide-eyed and haunted, the expressions on these young girls' faces hint at the innocence so cruelly snatched away from them.
They should be playing, learning and enjoying their childhood. But instead these youngsters have been forced to grow up before they have even reached puberty.
Girls as young as five are being married off in secret weddings. It is estimated that every year ten to 12 million girls in the developing world are married off.
In India, the girls will typically be attached to boys four or five years older. In Yemen, Afghanistan, Ethiopia and other countries with high early marriage rates, the husbands may be young men or middle-aged widowers or abductors who rape first and claim their victims as wives afterwards.
Forced early marriage thrives in many regions, often in defiance of national laws. Whole communities often prescribe to the notion that it is as an appropriate way forayoung woman to grow up when the alternative is the risk she loses her virginity to someone besidesahusband.
Wedding ceremonies are often held in the middle of the night, with the whole village keeping the secret for fear it might be interrupted by police.
Inaproject for National Geographic, journalist Cynthia Gorney and photographer Stephanie Sinclair travelled to Yemen and Rajasthan in India to investigate the shocking practice.
In India girls may not legally marry before age 18 - but ceremonies involving girls in their teens may be overlooked. The younger daughters, as young as five, tend to be added on discreetly, their names kept off the invitations.
He warned that if he was sent to jail, he would kill Ayesha when he got out. The police left without troubling anyone and Ayesha now lived inavillage two hours away with her husband.
Girls are often too young to understand the concept of reproduction. The doctor said: 'The nurses start by asking, ''Do you know what's happening?'" Do you understand that this isababy that has been growing inside of you?''
Posted by peter kyaw | at 11:22 AM |
Labels: news : dailymail.co.uk
ကိုယ်တိုင်လည်းသမီးလေးမွေးထားတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ် အဓိကကတော့ကုလားလူမျိုးတွေ လုပ်တာများတယ်ထင်တယ် ဒါကြောင့်ကုလားတွေကိုကြည့်လို့ကိုမရဘူး မျိုးပွားဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေကြတယ် ကိုယ်ချင်းစာတရားခေါင်ပါးတဲ့ဟာတွေ
ခက်တော့ ခက်နေပါပြီ။ ဒွတ်နယာဂျီး ပက်ချီးနေပီ ကိုပီတာရေ။